Duulimaadyada Mareykanka ayaa laga yaabaa in dhawaan looga baahdo inay soo celiyaan khidmadaha dib u dhaca ku yimid shandadaha
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Duulimaadyada Mareykanka ayaa laga yaabaa in dhawaan looga baahdo inay soo celiyaan khidmadaha dib u dhaca ku yimid shandadaha
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • News • Waajib ah • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Duulimaadyada Mareykanka ayaa laga yaabaa dhawaan in looga baahdo inay soo celiyaan khidmadaha dib u dhaca ku yimid shandadaha
Soo jeedintu waxay u baahan tahay lacag celin haddii shirkadaha diyaaradaha ay ku guuldareystaan ​​inay jawaan keenaan 12 saacadood gudahood duulimaadka Mareykanka ee rakaabka ama 25 saacadood gudahood duulimaad caalami ah.
Xeerarka hadda jira waxay u baahan yihiin lacag celin kaliya haddii boorsooyinku lumaan.
Soo jeedinta lacagta-kiishka ayaa ah tii ugu horreysay ee dhowr xeerar oo duullimaadyada iyo macaamiisha ka imanaya maamulka Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden.
Haddii la ansixiyo, soo jeedintu waxay dhaqan geli kartaa xagaaga soo socda.
Sarkaal sare oo ka tirsan Waaxda Gaadiidka Mareykanka ayaa sheegay in wakaaladdu ay soo saari doonto soo jeedin maalmaha soo socda taas oo ka dalban doonta shirkadaha diyaaradaha inay dib u soo celiyaan khidmada shandadaha la hubiyay haddii boorsooyinka aan loo keenin rakaabka muddo “macquul ah”.
Soo-jeedinta, haddii la sameeyo kama-dambaysta ka dib hannaanka qorista ee dheer, waxay sidoo kale u baahan tahay soo-celin deg-deg ah oo loogu talagalay khidmadaha siyaado ah sida marin-u-helka internetka haddii ay shirkaddu ku guuldareysato inay bixiso adeegga inta ay socoto duulimaadka.
Haddii la ansixiyo, soo jeedinta waxay dhaqan geli kartaa xagaaga soo socda, ayuu sarkaalku ku daray.
Xeerarka hadda jira waxay u baahan yihiin lacag celin kaliya haddii boorsooyinku lumaan, in kasta oo shirkadaha duulimaadyadu ay tahay inay ka magdhabaan rakaabka kharashaadka “macquulka ah” ee soo baxa inta boorsooyinkoodu dib u dhacayaan. Dawladdu ma oga inta jeer ee shirkadaha duulimaadyadu ay sii hayaan khidmadaha xitaa marka boorsooyinku si weyn dib ugu dhacaan.
Soo jeedinta lacagta-bacda ayaa ah tii ugu horreysay ee xeerar dhowr ah oo khuseeya shirkadaha diyaaradaha iyo macaamiisha ee ka imanaya maamulka Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyadoo la raacayo amar fulineed oo madaxweynuhu dhawaan saxiixi doono, sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan Waaxda Gaadiidka (DOT), oo si shuruud leh ku hadlay. qarsoodi ah si looga wada hadlo soo jeedin aan la shaacin. Amarkan ayaa loo qaabeyn doonaa si kor loogu qaado tartanka isla markaana macaamiisha loo siiyo awood dheeri ah, sarkaalka ayaa yiri.
Sanadkii la soo dhaafay, in ka badan 100,000 oo macaamiil ah ayaa dowladda uga dacwooday adeegga diyaaradaha. Lacag celinta ayaa aheyd qabashadii ugu weyneyd, in kasta oo inta badan shirkadaha duulimaadyada sheegta ay diideen inay lacag celiyaan macaamiishii baajiyay safaradii cudurka dartiis. Waaxda Gaadiidku waxay raadineysaa $ 25.5 milyan oo ganaax ah oo ka dhan ah Air Canada, laakiin wax tallaabo ah kama qaadin xamuulleyda kale ee ka celinaya lacag celinta duulimaadyadii la joojiyey.
Sannadkii 2019, sanadkii ugu dambeeyay ee ugu horreeyay intaan la helin faafida, rakaabku waxay bixiyeen shirkadaha diyaaradaha ee Mareykanka $ 5.76 bilyan oo doollar oo ku saabsan boorsooyinka la baaray, sida ay sheegtay Waaxda Gaadiidka. Taasi waxay hoos ugu dhacday $ 2.84 bilyan sanadkii hore, markii safarku hoos u dhacay sababo la xiriira faafida. Tirooyinka kuma jiraan khidmadaha bacaha lagu sido.